Ihe ị ga-ahụ na mpaghara okike nke Valle del Jerte na Extremadura | Akụkọ Njem
Susana Garcia | | Ihe ị ga-ahụ, njem
Valle del Jerte bụ ebe ọdịkarị dị na Extremadura. A mpaghara okike jupụtara na mbara ala mara mma nke ghọrọ onye ama ama karịsịa maka okooko osisi cherry n'oge opupu ihe ubi, ebe ọ bụ ezigbo anya ịhụ. Ma na ndagwurugwu Jerte enwere otutu osisi cherry, obu ezie na ha amaara ha.
Anyị ga-ahụ ụfọdụ n'ime ihe ị ga-eme ma hụ na ndagwurugwu Jerte, ebe na-emewanye njem nleta n'ihi na ọ na-enye isi ihe dị iche iche mmasị. Site na obodo ndi ozo di iche iche rue ebe ndi ozo maka ịsa ahu n'oge okpomọkụ, uzo ndi njem nleta ma obu uzo iji nwee obi uto na ndagwurugwu
1 Udara okooko osisi
2 Ọdịdị Akpịrị Akpịrị nke Hel
3 Cabezuela del Valle na Cherry Museum
4 Jerte na Tornavacas
5 Routezọ agafe site na echiche
6 Plasencia, 'peel nke ndagwurugwu'
Udara okooko osisi
N’ọnwa Machị ma ọ bụ Eprel, osisi cherry na-ama ifuru, nke mere ka ndagwurugwu a ma ama. Nke a bụ n'ihi na akwa mara mma okooko osisi cherị, nke ọtụtụ narị osisi na-amụba na -emepụta mmetụta nke blanket floral n'elu ndagwurugwu. Enwere ọtụtụ ndị na-eme njem naanị na Valle del Jerte iji hụ okooko osisi cherry ndị a, nke na-adịru obere oge wee pụta n'oge opupu ihe ubi. Agbanyeghị, ọ bụrụ na anyị gaa na ndagwurugwu ahụ n'oge ndị ọzọ anyị ga-enwe mgbakwunye ndị ọzọ nwere ike ime ka njem anyị na-atọ ụtọ. N'oge oyi, enwere obi iru ala na oghere ndị a, dị mma maka njem. N'oge mgbụsị akwụkwọ ị nwere ike ịnụ ụtọ mgbanwe nke agba na epupụta nke osisi yana n'oge ọkọchị ị nwere ike ịnụ ụtọ ọdọ mmiri ọdọ mmiri dị iche iche dị na mpaghara ahụ.
Ọdịdị Akpịrị Akpịrị nke Hel
Reserve a nwere ọtụtụ ụdị osisi na ahịhịa na osisi, yana yana ụzọ ụkwụ na nnukwu ọdọ mmiri dị n'èzí. Ọ ga-ekwe omume ịhụ ugo ọla edo, griffon udele ma ọ bụ falkon peregrine. E nwere ihe omume ndị ọzọ enwere ike ịme, dịka ụzọ ụgbọ ala ma ọ bụ igwe, ịnyịnya nnụnụ ma ọ bụ ịgagharị na mpaghara nke mpaghara ahụ. Ebe ntụgharị okwu nke Garganta de los Infierno dị na mba 110, okporo ụzọ nke na-agafe na ndagwurugwu Jerte, yabụ anyị ga-ahụ ya ngwa ngwa. Na Los Pilones bụ ebe a kacha mara amara, karịsịa n'oge ọkọchị, ebe ọ bụ na mmiri a na-akpọ ibu kettles bụ ọdọ mmiri ndị dị jụụ na nke dị jụụ nke dị n'etiti nkume, nke na-etolite ebe mara mma mara mma iji jiri ezigbo bat na-eme ka ọ dị jụụ n'oge. Site n’etiti ahịrị ụzọ ụkwụ abụọ ama akara, nke kachasị ogologo na kilomita 16 na okirikiri. Nke ọzọ bụ linear na bụ nke mbụ, na isii kilomita na site na Los Pilones.
Cabezuela del Valle na Cherry Museum
Cabezuela del Valle bụ otu n'ime ihe ndị kasị touristic ebe na mpaghara, na a mma akụkọ ihe mere eme bụ ụlọ ụka San Miguel Arcángel dị. Obodo a bụ Cherry Museum, nke a na-emechi na Mọnde na Tuesday, nke anyị nwere ike ịmatakwu banyere mkpụrụ a nke na-eme ka ndagwurugwu a ma ama na aha ya. N'aka nke ọzọ, anyị ga-ahụkwa Centerlọ Ọrụ Nkọwa Mmiri.
Jerte na Tornavacas
La Jerte obodo na-enye oghere okike mara ezigbo mma, nwere osisi cherry na ala ahịhịa juru. N'ime etiti enwere ike ịhụ ụlọ ndị nwere nnukwu mbara ihu osisi. Enwere ụfọdụ nleta, dịka ụka parish nke narị afọ nke XNUMX nke Nuestra Señora de la Asunción. N'oge ọkọchị, e nwere ọdọ mmiri nkịtị n'ime obodo ahụ, El Nogalón. N'obodo Tornavacas ị nwere ike ịnụ ụtọ thelọ Ọrụ Ntugharị Na Transhumance, ọrụ dị oke mkpa na mpaghara ahụ. Ha nwekwara ụlọ ụka nke Our Lady nke Assumption nke baroque style.
Routezọ agafe site na echiche
Ndagwurugwu Jerte na-enye otu ụdị egwuregwu amphitheater nke na-enye gị ohere ịnwe ọtụtụ echiche dịgasị iche iche nke ị ga-esi nwee ọ enjoyụ mara mma nke okooko osisi cherị. Ọ bụrụ na anyị soro ụzọ ụkwụ akara ụkwụ anyị nwere na ndagwurugwu ahụ, ọ ga-ekwe omume iru ọtụtụ echiche, ịbụ ụzọ kachasị mfe iji chọta ha. Enwere ọtụtụ n'ime ha ma ha bụ ebe zuru oke iji kwụsị iji were foto ma ọ bụ lelee anụ ọhịa na ahịhịa nke ebe ahụ. Offọdụ n'ime ha bụ Mirador Puerto de Tornavacas, na Mirador Avenida Extremadura ma ọ bụ Mirador del Chorrero de la Virgen.
Plasencia, 'peel nke ndagwurugwu'
Obodo Plasencia dị nso na ndagwurugwu Jerte, ya mere ọ dịkwa mma nleta mgbe anyị na-agagharị na mpaghara ahụ. N'ezie, a na-akpọ ya 'peel nke ndagwurugwu'. Obodo a nwere ebe dị ezigbo mkpa na akụkọ ihe mere eme, ebe ị ga-ekpori ndụ na katidral ochie na nke ochie na ụlọ pụrụ iche, ihe dị ndụ Plaza Mayor ma ọ bụ mgbidi ochie nke ahụ chebere obodo ahụ. Enwere ike ịhụ obodo ahụ n'ime otu ụbọchị ma ọ bụ ụbọchị abụọ mgbe ị gachara ebe okike nke ndagwurugwu Jerte.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » njem » Ihe ị ga-ahụ » Ihe ị ga-ahụ na ndagwurugwu Jerte, Extremadura